Emepụtara ụdị ọhụrụ nke gburugburu desktọọpụ Xfce 4.14 | Site na Linux
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke gburugburu desktọọpụ Xfce 4.14
Mgbe ihe karịrị afọ anọ nke mmepe, a kwadebela mbipụta ọhụrụ nke gburugburu ebe obibi desktọọpụ Xfce 4.14, ezubere ịnye desktọọpụ kpochapụwo nke chọrọ ntakịrị akụrụngwa maka ọrụ ya.
Xfce nwere usoro nke njikọta njikọta nke, ọ bụrụ na achọrọ, enwere ike iji ya rụọ ọrụ ndị ọzọ. Ihe ndị a gụnyere: njikwa windo, ngwa ngwa, onye ngosi ngosi, onye njikwa oge na njikwa ike, a Thunar njikwa faili, ihe nchọgharị Midori, Parole media player, ederede ederedepadpad, yana usoro nhazi gburugburu.
Kedu ihe ọhụrụ na Xfce 4.14?
Na ụdị ọhụrụ a na njikwa xfwm4, kwukwara vsync site na OpenGL, nkwado maka libepoxy na DRI3 / Ugbu a pụtara, na GLX ejiri ya mee ihe karịa Xrender.
Mmezi mmekọrịta nhazi na etiti blanking usu (vblank) iji nye nchebe megide gapping (tearing). A na - etinye ikike GTK3 dị iche iche, nke nyere ohere iji melite ọrụ na ngebichi na njupụta pixel dị elu (HiDPI).
Nkwado GLX ka mma mgbe ị na-eji ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA. Agbakwunyere nkwado maka usoro ntinye XInput2. Webatara a ọhụrụ imewe isiokwu.
Agbakwunyere agba agba agba ọhụrụ na nhazi xfce4-ntọala ịtọ nchapụta nnọchi anya ziri ezi site na iji profaịlụ agba. Azụ na-enye gị ohere ịnye nkwado njikwa agba maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nyocha; Iji jiri profaịlụ agba nke monitors, ị ga-etinyerịrị ọrụ ọzọ dị ka xiccd.
Xfce 4.14 na-ewebata klas CSS ọhụụ maka iji mepụta isiokwuDịka ọmụmaatụ, a na-agbakwunye bọtịnụ dị iche iche maka arụmọrụ na otu windo na ntọala ụfọdụ maka ntinye na ntanetị na ntanetị. Na plugins maka panel na ngwa ahụ, akara ngosi ihe atụ gụnyere.
Ihe mejuputara ya bu ihe nlebara anya nke Dashboard, nke na-enye gị ohere ịmepụta, chekwaa ma rụọ ọrụ profaịlụ na nhazi
Onye njikwa nnọkọ nke xfce4 na-enye nkwado maka ịmalite ngwa, na-eburu n'uche otu ndị kachasị mkpa ga-enyere gị aka ikpebi usoro ịdabere na mmalite.
N'aka nke ọzọ njikwa njikwa njikwa dị mma (xfce4-power-manager), tinyere nkwado dị mma maka sistemụ ọdụ nke enweghị ịdọ aka na ntị batrị dị ala.
Agbakwunyere nzacha nke ihe ndị metụtara ebute ike ọkọnọ sistemụ na xfce4-amara ọkwa ka egosiputa na log (dịka ọmụmaatụ, anaghị ebunye ihe mgbanwe nchapụta). Agbakwunye ikike ịkpọ oku njikwa ike mgbe a na-agbanye bọtịnụ XF86Battery.
Na ngwa mgbakwunye dashboard, agbakwunyela nhọrọ iji gosipụta ndụ batrị fọdụrụnụ na pasent nke ụgwọ.
E melitela njikwa faili Thunar, ebe agbanweela ihe ngosi ihe ngosi faịlụ.
Agbakwunyere bọtịnụ na panel iji kpoo ụzọ ụzọ mepere emepe wee gaa n'ihu, na-agagharị na isi ndekọ na isi ndekọ.
Na mgbakwunye, emelitere Thunar Plugin API (thunarx), nke na-enye nkwado maka nyocha intaneti na ojiji nke folda n'asụsụ mmemme dị iche iche. Na-egosiputa na nke faịlụ na bytes.
Enwere ike ịnye ndị njikwa ka ha rụọ ọrụ akọwapụtara onye ọrụ. Enweela ike iji Thunar UCA (Ọrụ Configurable Omume) maka ihe ntanetị dị na mpụga. Njikarịcha nke ụdị na interface.
PulseAudio nke dabere na ngwangwa njikwa ụda gbakwunyere nkwado maka usoro MPRIS2 n'ihi na ime akara nke playback na media Player. Enwere ike iji igodo multimedia niile na desktọọpụ (malite usoro ndabere usoro xfce4-volumed-pulse).
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere mwepụta a, ị nwere ike ịkpọtụrụ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke gburugburu desktọọpụ Xfce 4.14
Ọ dị mma. Enwere m mint mint 19.2. Ọ nwere ụzọ ọ bụla iji melite xfce na-echeghị ka nsonye October ọzọ?
Zaghachi Daniel Aragon
Manjaro ga-ahapụ gị ịhọrọ n'etiti FreeOffice na LibreOffice
Ubuntu 18.04.3 LTS melite nke atọ wepụtara